Xavi kaliya maahan… xiddig hore ee kooxda Barcelona ah oo ku riyoonaya inuu macalin u noqdo Barca – Gool FM
(Barcelona) 06 Abril 2020. Kursiga tababarka ee kooxda Barcelona ayaa tijaabinaya xiddigo badan oo horey ugu soo ciyaaray Barca, oo ay ku jiraan Xavi Hernandez iyo Rafael Márquez.
Labadan halyeey ee Xavi Hernandez iyo Rafael Márquez ayaa waxay doonayaan inay raacaan wadadii Pep Guardiola iyo Luis Enrique.
Daafacii hore kooxda kubadda cagta Barcelona iyo xulka qaranka Mexico ee Rafael Márquez ayaa sheegay inuu ku riyoonayo inuu ku laabto kooxda reer Catalonia, laakiin wuxuu markan doonayay isagoo ah macalin, gaar ahaan tan iyo markii uu ku dhawaaqay inuu ciyaaraha ka fariistay 2018.
Márquez ayaa soo xirnaa maaliyada kooxda Barcelona intii u dhexeysay 2003 ilaa iyo 2010, waxaana guulihii ugu waa weynaa uu la gaaray ay kala ahaayeen, ku guuleysiga UEFA Champions League oo labo jeer ah, horyaalka La Liga oo 4 jeer ah, iyo Club World Cup oo hal mar ah.
Haddaba wargeyska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Rafael Márquez, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waxaan isku arkaa amiga ahaan inaan macalin ka noqon doono Yurub mustaqbalka dhow.”
“Waxaan xiriir weyn la leeyahay halkaas, waxaana ku riyoonayaa inaan maalin un tababare u noqdo Barcelona.”
“Haddii ay suurtogal tahay in aan kashaqeeyo Mexico waqti kasta, waxaan ku sameyn doonaa arrintaan si farxad leh, laakiin waxaan u maleynayaa in qaarada Yurub ay tahay meesha ugu fiican ee adduunka kubadda cagta.”